नेपाली डाक्टरले संसार हल्लाए: मृ*त मानिसको मु*टु झिकेर जी*उँदोमा प्र*त्यारोपण ? सम्मान स्वरुप एक एक शेयर गराै ! – All top Here
Home/समाचार/नेपाली डाक्टरले संसार हल्लाए: मृ*त मानिसको मु*टु झिकेर जी*उँदोमा प्र*त्यारोपण ? सम्मान स्वरुप एक एक शेयर गराै !
नेपाली डाक्टरले संसार हल्लाए: मृ*त मानिसको मु*टु झिकेर जी*उँदोमा प्र*त्यारोपण ? सम्मान स्वरुप एक एक शेयर गराै !
मृ*त मानिसको मु*टु आधा घन्टामा झि*केर मेसिनमा राखेर त्यसलाई पूर्ण रूपमा जीवित र सक्रिय बनाएर मुटु काम नलागेर मृ*त्युको मुखमा पुगेका बिरा*मीलाई त्यो मुटु प्रत्यारो*पण गर्ने । यो विश्व चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा हासिल गरिएको चानचुने सफलता होइन । यस्तो दुर्लभ वैज्ञानिक चमत्कारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पनि नेपाली डाक्टरलाई नै मिल्यो । हो, चार वर्षअघि यही चमत्कारी काम गरेर संसारभरि चर्चित भए अस्ट्रेलियामा कार्यरत नेपाली डा कुमुद धिताल । उनको सफल प्रयोग अहिले विश्वभरि फैलिइसकेको छ भने धिताल कार्यरत अस्पतालमा मात्रै अहिलेसम्म २४ जना विरामीलाई मुटु प्रत्यारोपण गरेर पुनर्जीवन दिइएको छ ।
अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित सेन्ट भिन्सेन्ट अस्पतालका प्राध्यापक धितालले चार वर्षअघि सोही अस्पतालमा मृ*त मान्छेको मु*टु झिके*र बिरामीलाई प्रत्या*रोपण गरेका थिए । धितालले हासिल गरेको सफलतालाई ३० वर्ष नाघेका व्यक्तिको मु*टु प्रत्या*रोपण क्षेत्रमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । भन्छन्, “अब त मैले तालिम मात्र दिने हो, मेरा विद्यार्थीहरूले नै यो काम गरिरहेका छन् । र, अहिले संसारभरि नै यो फैलिइरहेको छ ।” साउनको पहिलो साता पनि धिताल मुटु प्रत्यारोपण सम्बन्धी कार्यशालामा भाग लिन बेलायत गएका थिए । धितालको प्रयोग बेलायतमा पनि विस्तार भइसकेको छ । मृ*त्यु भएको आधा घन्टाभन्दा बढी समयमा पनि मु*टु निकालेर कसरी सफल प्रत्यारो*पण गर्न सकिन्छ भन्नेमा अहिले धितालको शोध केन्द्रित छ ।
भन्छन्– “अहिलेचाहिँ हामी आधा घन्टाको समयलाई लम्ब्याउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेमा अनुसन्धान गर्दैछौँ । यसमा पनि सकारात्मक सफलता मिल्ने आशा छ ।” मृ*त मान्छेको मु*टु निकालेर प्रत्यारोप8ण गर्नुअघि धितालले सुँगुर र छुचुन्द्रोमा त्यसको परीक्षण गरेका थिए । उनी आफैँले सुरुमा चार मुटु रो*गीमा मृ*त मान्छेको मु*टु प्रत्यारो*पण गरेका थिए । विभिन्न कारणले मुटु काम नलाग्ने भएकाहरूका लागि धितालले सुरु गरेको मुटु प्रत्यारोपण पद्धति रामबाण सावित भएको छ । कुमुद धितालको पुख्र्यौली घर गोरखा हो । उनी इटालीको रोममा जन्मेका हुन् भने उनले विद्यालय शिक्षा सेन्टजेभियर्स स्कुल ललितपुरबाट पूरा गरेका हुन् ।